सुनिता थेगिम युवापुस्ताको चर्चित गायिकासंगको मिठो मिठो रमाइलो कुराकानी | onlineharpal.com
सुनिता थेगिम युवापुस्ताको चर्चित गायिकासंगको मिठो मिठो रमाइलो कुराकानी
on: १२ बैशाख २०७४, मंगलवार २१:३१ In: bignews1, अन्तर्वाता
आदरणीय दर्शक स्रोता आज फेरि यहाँहरुको साथमा एक जना नयाँ पाहुना लिएर उपस्थित भएका छौ उहाँ नेपाली सांगीतिक अकासकी एक चर्चित एवं उदयमान गायिका, युवा पुस्ताले अत्यन्तै रुचाएकी गायिका हुनुहुन्छ जसको नाम हो सुनिता थेगिम लिम्बु उहाँलाई खानेकुरा मध्ये मसरुम एकदम मिठो लाग्छरे, उहाँ बिहानीको समय मन पराउनु हुन्छ, फलफुल मध्ये अंगुर एकदमै मनपराउनु हुन्छ र फुलहरु मध्ये मखमली फुल एकदम मन पर्छरे आउनुहोस उहाँलाइ खबर कोसेली डटकममा हार्दिक स्वागत गरौ।
स्वागत छ यहाँलाई।
– धन्यवाद, नमस्ते, खबर कोसेली डटकम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्णलाइ।
अहिले तपाई कलाकारितामा निकै जम्नु भाको छनी यहाँलाइ चै कस्तो लागि राखेको छ त ?
– बिशेषत गीत संगीत बिना कल्पना पनि गर्न सकिदैन जीवनलाई र छोटो समय मै बुझेर सिकेर यो क्षेत्रमा अगाडी बढी हाल्छु भन्नु गलत धारणा हो। धेरै सिकेर र राम्ररी बुझेर म्युजिकलाइ बुझेर अगाडी बढ्नु पर्छ। अहिले म चै आफ्नो म्युजिकल करियरलाइ एकदम लगनशील भएर लागि राखेको छु त्यसैले खुसि नै लागेको छ।
निकै सुमधुर, कर्णप्रिय र मिठो छ यहाँको स्वर धेरै दर्शक स्रोताहरुले मन पराइ रहेकाछन। यहाँको गीतहरु लाखौले हेरिरहेको छ। यस्तो कला चै कहाँबाट सिक्नु भो नि ?
– यो चै एउटा गट गिफटेड पनि हुनु पर्छ जस्तो लाग्छ। सानो हुँदा गाउन सक्छु भन्ने कुरा त मलाई थाहा थिएन पछि आएर अचानक यो फिल्डमा म्युजिक सिक्ने रहर जाग्यो त्यस पछी गुरुसँग कन्सल्ट गरे पछि म्युजिकको नलेज इम्पोटेन्टहरु थाहा पाएँ। र स्टेजहरुमा म गाउने क्रममा गाउँदै जाँदा एकदमै धेरै पुरष्कारहरुले पनि पुरष्कृत भएँ त्यस पछि अझ हौसला बढ्यो। जब मैले प्लस टू झापाबाट कम्प्लिट गरेर काठमाडौँ आएँ त्यस पछि चै प्रोफेसनल तरिकाले नै म्युजिक करियरमा लागि राखेको छु।
तपाईले यो संगीत क्षेत्रमा प्रवेश गर्नको निम्ति प्रणा चै को बाट पाउनु भयो ?
– सर्ब प्रथम त कुनै पनि काम स्टार्ट गरेर सक्सेस गर्नको लागि परिवारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसैले स्टाटिङ देखिनै मेरो फ्यामिलिको एकदमै राम्रो साथ, सहयोग र सपोट छ साथै रिलेटिभहरुको पनि राम्रो हौसला थियो इन्स्पिरेसन थियो। म सानै देखि अलिकति राम्रै म्युजिकल वातावरणमा हुर्के र अग्रजहरुकै इन्स्पिरेसनले म यहाँ सम्म आइपुगेको छु र आम दर्शक स्रोतले माया दिरहनु भएको छ।
यतिखेर यहाँ निकै चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ फ्यान फलोवरको कल म्यासेजहरु चै कतिको आउँछ ?
– म्यासेजहरु त एभ्रिडे आइनै राखेको हुन्छ तर वाईयात म्यासेजहरु हुदैन मेरो गीतहरुको सम्पूर्ण म्यासेजहरु चै मलाइनै गर्नु हुन्छ युटूबमा भन्दा बढी मेरो पर्सनल म्यासेज मै आउँछ, मेरो नामको फेसबुक आइडीहरु पनि थुप्रै छ त्यै भएर उहाँहरुले बढी जसो मेरो फेसबुक पेजमा म्यासेज गर्नु हुन्छ र मैले तेसैबाट रेस्पोन्स गर्ने गर्छु।
प्राय जसो म्यासेजमा कोस्तो खालको कमेन्टहरु आउछ ?
– तपाइको यो गीत चै एकदम राम्रो लग्यो प्रगतिको कामना किप इट अप भन्ने खालको म्यासेजहरु चै म्याक्सिमम आउँछ।
यहाँलाइ नकारात्मक टाइपको म्यासेज चै कतिको आउँछ ?
– त्यस्तो त खास आको छैन कहिले कहिँ चै हाइ बोल्नु न, किन नबोल्नु भाको, कति सरो ठुलो भाको टाइप को चै आउँछ। सबै जनालाई एकै चोटी म्यासेज गर्न चै गारो हुन्छ त्यै भएर ठुलो पल्टेको चै हैन, पक्कै पनि घमण्ड पनि गरेको हैन तर पनि इन्स्पिरेसन म्यासेज चै छ भने म पक्कै पनि रेस्पोन्स गर्छु।
यहाँलाइ मन पर्ने समय ?
-मलाइ साझँ त्यति रमाइलो लाग्दैन बिहानको समय एकदम फ्रेस हुन्छ मन पर्छ र महत्वपूर्ण कामहरु बिहानै उठेर गर्छु।
फुलहरु मध्ये सबै भन्दा मन पर्ने फुल चै कुन हो ?
– मालाई मखमली एकदमै मन पर्छ र कलर पनि मन पर्छ ।
सबै भन्दा मिठो लाग्ने फलफुल मध्ये ?
– मलाइ ग्रेप्स अंगुर, यो खाए पछि चै घाँटीलाइ पनि सफा भएको होकी जस्तो फिल हुन्छ अनि त्यहाँको पानीले चै मलाइ दिनभर फ्रेस राख्छ।
खानेकुरा मध्ये सबै भन्दा मिठो के लाग्छ ?
– म भेजीटेरियन भएको कारणले गर्दा मसरुम यानिकी च्याउ मन पर्छ।
यहाँलाइ अघिल्लो पुस्ताको चर्चित गायिका सुनिता सुब्बाको दोस्रो संस्करणका रुपमा मानिसहरुले लिन थालेका छन यसमा के भन्नु हुन्छ ?
– उहाँहरुले जुन दृष्टीले हेर्नुहुन्छ म पोजिटिभलि नै लिन्छु उहाँहरुले पहिलो बाटो त देखाई दिनु भयो त्यस पछि फलो गर्ने त हामीले नै हो र हामीले फेरि आउने पिडिहरुलाई त्यसरी नै बाटो देखाउदै लानु पर्छ। खुशी लाग्छ सुनिता सुब्बाको दोस्रो संस्करण भनेको सुन्दा खेरि।
यहाँले आफ्नो भाषाको लिम्बु गीतहरु चै कति गाउँनु भाछ ?
– दर्जन जति पुग्न लाग्यो तर मैले जति पनि लिम्बु गीतहरु गाएको छु सबै आम दर्शकहरुले मनपराइ दिनु भाको छ र लिम्बु गीतहरु थोरै गाए पनि सेलेक्टिभ गएको छु जस्तो लाग्छ।
यहाँलाइ कुन गायन विधाको गीत चै गाउँन मन पर्छ प्राय जसो ?
– म सबै विधाको गाउँन रुचाउँछु र गाउँछु तर पनि त्यस मध्ये आफुलाई धेरै मज्जा आउने चै मेलोडीअस हो र स्टेजहरुमा गाउँदा चै अलि डान्सिङ र रोमान्टिक सोङहरुनै गाउँन मज्जा आउँछ।
पप गीतहरु नि गाउनु भाछ ?
– गाएको छु मैले र टिपिकल फोक सङहरु पनि गाएको छु, कल्चरल सङहरु पनि गाएको छु र आधुनिक सङहरु बाहेक पुर्बेली गीतहरुलाइ पनि एकदम माया गर्छु ।
यहाँले भरखर नयाँ गीतहरु रिलिज गर्नु भाछ कुन कुन हो ?
– दुइ वटा गीत रिलिज भाको छ एउटा भाषिक गीत छ नुरिक आङ वाए मेनजिए र अन्तिम सास भन्ने गित भर्खर रिलिज भाको हो।
यहाँको स्वर मिठो छ कोइलिको जस्तै कर्णप्रिय छ प्रेम प्रस्ताब चै कतिको आउँछ नि ?
– अबस्य पनि आउँछ तर मैले नचिनेको नदेखेको फ्यानहरुले लभ म्यासेजहरु पठाउनु हुन्छ मैले त्यसलाई पोजिटिभलि नै लिन्छु किन भने उहाँहरुले एकदमै माया गर्नु भाको हो जस्तो मलाइ लाग्छ मेरो भोकललाइ मन पराएर, मेरो प्रस्तुतिहरुलाई, मेरो प्रतिभालाई मन पराएर उहाँहरुले त्यस्तो म्यासेज गर्नु भाको हो त्यस्तो म्यासेजलाइ म राम्रो तरिकाले नै रेस्पोन्स गर्छु प्रेम प्रस्ताब आए पनि म त्यसलाई थ्याँक्यु भनेर हेन्डल गर्ने गर्छु।
रिलेसनसिपमा हुनुहुन्छ त ?
– छैन, माया गर्ने मान्छेहरु हुनुहुन्छ आफ्नो एजको देखि लिएर अग्रजहरुले पनि अत्यन्तै माया गर्नु हुन्छ तर रिलेसनसिप मै चै छैन।
यो सोचमा हुनुहुन्छ कि छैन ?
– राइट टाइम आउँछ होला माया गर्नु हुन्छ माया गर्ने मान्छेलाइ माया गर्नु पर्छ।
अब हामी कार्यक्रमको अन्त्य तिर आइपुगेका छौ आफ्नो फ्यान, फलोवर र दर्शक स्रोताहरुलाई के भन्नु हुन्छ ?
– खबर कोसेली हेरेर बस्नु हुने यहाँहरु सम्पूर्णलाइ हामी जस्तो सिंगारहरुलाई यहाँहरुको सल्लाह, सुझाब अनि हौसलाको अत्यन्तै आबस्यक छ त्यसैले हामीलाई युटुबमा खोजेर हेर्न सक्नु हुने छ, कमेन्टहरु राखिदिन सक्नु हुनेछ त्यसै गरि अहिले फेसबुक मार्फत पनि यहाँहरुले आफ्नो सल्लाह, सुझाव दिन सक्नु हुनेछ र मेरो आउँदै गरेको गीतहरु यहाँहरुसम्म पुर्याउने कोसिस गर्दै छौ। युटुब मार्फत दिएका छौ हाम्रो नयाँ नयाँ भिडियोहरु र पक्कै पनि मेरो नयाँ एलबमलाइ चै यहाँहरुको साथ चाहिएको छ जेठअसर भित्र यहाँहरु माझ पुर्याउदै छु धन्यवाद।